Top 50 Online Radio Stations talinayaa in aad
Inkasta oo idaacadaha jirka ayaa noqday dhacsan, waxaa jira xarumo badan oo radio online la dooran Karin labaad. Dhab ahaantii, tani waxay arrimuhu cusub soo baxday in la si fiican u helay ka mid ah Said dunida oo dhan. Si uu u dherjiyo aad u baahan tahay, halkan waxaan ku qor 50 goobood radio online sare in uu kaaga caawiyo in ay dhagaystaan ​​news, music, hadal muujinaysaa online.
Radio Yahoo! Music waa qayb ka mid ah sub ee Yahoo.com.It u adeegtaa sida oo kale service.It radio internet ayaa channel cad codsiga communication.This waxaa markii hore ee ay soo Todd Beaupre iyo Jeff Boulter.They bilaabay adeeggan in November 11, 1999.That yahoo iibsadaan shirkadda this.
Deezer waa adeeg laga cabsado music keena ah waayo-aragnimo music xiiso leh iyo deegaanka kala duwan in ka badan 26 milyan oo taageerayaasha music worldwide.The sheeko weyn ee Deezer waa kor ku xusan oo dhan sheekada shirkadda internetka music oo ay aasaasihii dhalinyaro ah Daniel Marhely oo uu doonayo in uu fuudh yeesho sida dadku u helaan ay music. Tani radio music cabsi badan loo abuuray by Daniel Marhely c sanadkii 2006.
Grooveshark waa kabista ah ka baxsan Media Group iyo adeeg geeyo radio music online ku salaysan oo dalka Mareykanka ah. Waxa uu leeyahay search engine gaar ah, adeeg hoorto, oo talo application.That sababta Users qulquli karaan iyo music in lagu ciyaari karaa si degdeg ah ama ku daray in ay playlist ah geliyaan
Last.fm waa cayn kasta service.It talo music waa cabsi. Waxaad isticmaali kartaa Last.fm ilaa saxiixa iyo degsado Scrobbler ayaa, kuwaas oo kaa caawinaya in aad si aad u maqasho music dheeraad ah oo ku salaysan heeso aad play.Scrobbler u dirtay Last.fm si aan u ogaano waxa song marka aad u ciyaareyso.
Dijital ah laga keeno waa adeeg radio internet ah oo multi-channel online in si gaar ah diiradda saarayaa Music Electronic iyo bir music heavey. Kooxdayada oo ah curators haadiyo dhex petabytes of daayo cusub iyo haayaha dib si aad u hesho kaliya ugu wanaagsan ee ka sifayn ama qaab kasta. Inkasta oo aanay had iyo jeer ahaa sida in.
Live365, saldhig online radio kaas oo bixiya 260+ qaybaha of music iyo 5000+ xarumo warbaahineed iyo soo saarayaasha tastemakers.The music xarun raadiye oo ay tani tahay Metheny, Johnny Cash, iyo Carlos Santana.They waxay diyaar u yihiin noocan oo dhan ee qalabka sida iPhone ama casriga ah .
Waxaa jira kaliya hal guriga free of radio internet iyo in uu yahay Shoutcast.It waxaa la aasaasay 100 oo haatan door sida diiwaanka ugu weyn ee xirfad leh oo ay leeyihiin leedahay koox fiican u yaqaanna iyo ciyaartoyda warbaahinta operate.Many sida Winam, Lugood, WMP iwm waa isku joog la idaacada this.
Haddii aad rabto in aad hesho ka dhacdooyin Danbeysay ee podcasts aad jeceshahay iyo waxay muujinaysaa in radio internet Stitcher Radio laga yaabaa in xal fiican ee you.They si toos ah barta si aad iPad ama casriga .Tani waxa aanu u baahan degsado anything.It ee sida fur iyo ciyaaro si dhab ah isku xiro oo maqla.
Rhapsody ayaa keentay music geeyo siiyo adeegyada ad-free xubnaha iyo ku siiyaan in ay helaan in ka badan 32 milyan oo noocyada kala duwan ee xubnaha songs.They're dhagaysto on guriga, ay telefoonka, in gaariga, shaqada ama ay Rhapsody qaadan halkaas oo ay ku tagaan . Shirkadda Tani waxay leeyihiin koox u gaar ah khabiir ku ah tifaftirayaasha abuuraan waayo aragnimo music macaan oo ay tani tahay wax ku ool ah dhegeystayaasha ay kordheen.
Waxay u cusbooneysiin posts halkan si joogto ah ula music news, isbedelada goobta, iyo qaababka cusub. Waxaa jira qaybaha badan oo la soo danbeyey oo la cusbooneysiiyey sida Spotlight, Injiil iwm
In ka badan 200 oo saldhigyada barnaamijkii waxaa laga heli karaa Slackers.You la qaadan kartaa saldhigga ku sifayn iyo geliso magaca artist & music maalin On.They cusboonaysiiso ay database waxaana rajeynayaa in ay koox oo ka caawisaa ku sii adeegi 24 saacadood maalintii iyo 365 maalmood year.They ah marti fanaaniinta cusub kaas oo ah mid gaar ah.
AccuRadio waa idaacada Radio Internet ah kaas oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo waxyaabaha ka iman kara jidka xiiso leh cusub ee radio Internet! Soo qaado channel kasta oo riix "" Play "" badhanka - music bilaabi doonaa ciyaaro sida radio AM / FM, marka laga reebo AccuRadio waxaad ka ciyaari kartaa heeso soo socda, mamnuuco fanaaniinta / songs aadan jeclaan iyo si ka badan.
13. Radio Jannada
RP waa boorish gaar ah Hababka iyo noocyo ka mid ah music iyo inta xulay si taxadar leh la isku daro laba Insaanka ee dhab ah oo badan. Waxaad maqli doonaa dhagaxa weyn oo casri ah iyo classic, music adduunka, xitaa xoogaa classical iyo jazz. Waxa aad maqli ma aha playlists computer-ahbaa random ama radio maskaxda ku-kabuubiso ah musicians.This waxaa la aasaasay by Bill & Rebecca Goldsmit.
SomaFM hadda online baahin oo ay ka ciyaaraan door aad u wanaagsan in Online Radio world.They idaacada ka bakhaar ee San Fransisco .Waxaa magaca waxaa aasaha waxaa Rusty Hodge.He go'aansaday inuu ku badalo xarun raadiye geeyo si ay u soo bandhigaan adduunka Internet oo uu guulaystaan.
RauteMusik (Short Magaca dhexena ama #Musik) waa xarun internet online radio taas oo ku salaysan yahay Germany. RauteMusik markii ugu horaysay la bilaabi ay warbaahinta on 20 April 2003 iyada oo keliya mid stream.After weyn ee 4 sano oo shaqo adag ay hadda yihiin radio ugu weyn oo ugu jecel ee wadamada Yurub.
AH.FM waa radio caan online in ciyaara Qalid iyo Progressive laysku daraa si gaar ah u soo AH.FM by DJ Top ay ka world.Firstly ku bilaabay sida mashruuc by Dan iyo AH bishii June 2006 ayaa koray ugu ixtiraamo Electronic Dance Music galay Idaacada internet-ka. Waxaa la Powered by in ka badan 220 DJ deggan, oo ay taageerayaan ciidan ka mid ah kuwii ku caashaqi jiray music dareen in dib markii bulshada saacadood.
Dadka muusiko dhegayso sida ay niyadda iyo waxa ay doonayaan musics ku haboon in ay hab, in la xoojiyo dawladda ay ku sugan yihiin ama halkii in wax laga beddelo. Interface A garaafyada ayaa la sameeyo Musicovery si loo daboolo baahidan, ee "" niyadda pad "": waxay ku tusaysaa laba isku xigta sumadaynta - madow / firfircoon / wanaagsan oo xawaal / etc.According in hab uu awoodo u habayn. Markasta oo user waa in ay hab iyo jagooyinka la doonayo ciyaari karo.
RadioIO, Inc. bixisaa ah radio internet madal warbaahinta online oo koriyo music huleeshay meel kasta, waqti kasta oo ku saabsan aaladaha internet ku xiran. Shirkadda RadioIO ee uu leeyahay asalka music adeeg buuxa ah iyo hannaanka deegaameed Fariin taageertaa ganacsiga waaweyn .Dad kale suuqyada taagan aswellness sida, hoteelada, caafimaadka iyo tafaariiqda.
Eyepartner waa shirkad gaar ah ka dhigaya iyo fulinta xal warbaahinta hoorto loogu talagalay Idaacadda ugu taas oo aan farsamo ama soo saare iyo ganacsadaha cusub. Xal Eyepartner waa saaxiibtinimo si ay u maareeyaan oo ay isticmaalaan .Waxay ka samatabbixin hawshoodu kala duwan ee CMS iyo waxa aad u waxtar leh.
Inkasta oo uu dhagaysto music online, aad TV, ama raadiyaha digital, raadiyaha Tani waa Double J. Waxaan idiin geeynayana waa mix weyn oo kala duwan oo music ugu fiican cusub ka Australia iyo wadamo kale, oo lagu daray gabayadii iyo fannaaniin in j xaafuun ayaa championed afartii sano ee lasoo dhaafay.
Radio VirtualDJ waa radio nool online taas oo ku kala firidhsanaayeen radio world.This isticmaali software la odhan jiray Virtual DJ .Waxa initialized ee 2005 iyo aad wax u maqli karo hiphop, dancehall, iyo reggaeton.In 2010 ay ku daray channel oo dheeraad ah si radio this.
Beesha Libre.fm waa isku dar ah nooca kala duwan ee superfans music iyo farshaxan, halkaas oo dhan ay wadaagaan karaan muusikadooda qof walbaa ku raaxaysto waxaa ahaanshaha. Waxa kale oo aad dhegaysan kartaa xulashada ugu caansan kuwan raadkaygay bulshada Libre.fm ee naga Station radio Community iyo Waxa ay kor u dhigtay oo ka mid nasiib ah oo dhan tareenka in dadka isticmaala Libre.fm ayaa sheegay in ay si dhab ah u jecel yahay waxaa aad u badan.
Tani waa radio Faransiiska, taas oo aad waayo-aragnimo weyn u dhegeysanaya.
Waxaa adduunka ka mid ah music oo ka kooban boqolaal playlists play sare & jecel yahay 26 milyan oo kuwan raadkaygay. Himiladooda waa in muuqan idinka samatabbixin music ugu fiican oo ay bixiyaan adeegga ku saabsan qalab kasta. Waxaa jira hal ku dhiga waa mid fudud sida in.
Waxaa jiray jeer ee la soo dhaafay markii Rik oo aan oo qoraal ah si wadajir ah marka aan ku dhowaad dhintay qosol. Kuwa qaar ka mid ah maalmaha doqon ugu riixdey aan waligay oo maalmood oo dahabka ahna waxaa sidoo kale, oo waxaan ka dareemayaa mudnaan inay iyaga iyo Hasha isaga la. Oo haatan uu u dhintay dhab ah ee shil baabuur. Ii lahayn ayuu dhintay. Oo garacna waa danayste.
26. oos Radio
Ardayga abaalmarinta ku guuleystay ee University of Sheffield baahin oos Radio ka Hub Media ee Sheffield Ardayda 'Union 24 / 7.This la aasaasay on 1995 oo ay Marayaan 120 toddobaad ee warbaahinta Media Hub oo ay haatan waxaa laga heli karaa oo keliya internetka iyo in qalabka oo dhan smart.
Mar kale Groovera korayo again.After Long-time dhagaystayaasha Groovera wada ognahay in City Jet ah Lounge (asal ahaan FrostByte jeexdin Lounge, OverXposure.com) taas oo ahayd waalidka oo dhan channels in Groovera qoreysa today.Hopefully Jet City Lounge weli waa Groovera ee flagship channel radio iyo waa ugu da'da weyn oo ugu caansan muddo ka dib la playlists si joogto ah u koraya channels cusub ah.
MAQAM waa shirkad wax soo saarka music-US salaysan takhasusay Carabi iyo warbaahinta Bariga Dhexe si gaar ah heesaha. Shirkadda waxaa la sameeyey koox yar oo music Carabi, dhaqanka caashaqi jiray, ka dib u yeela sida oo qeyb ka ah 3B Media Inc. "MAQAM" waa kalmad Carabi ah oo la micno ah meel ka mid ah kalsooni sare. Sidaas waxaa sidoo kale loola jeedaa hab muusikada iyo quruxda badan music Carabi taas oo ku salaysan qiyaasta quarter-ohyahay
Waa goob weyn radio u music oo aad ka heli karto badan oo ka mid ah fanaaniinta heesaha aad jeceshahay halkan.
30. maanta Hot Country
Maanta Hot Country waa shirkad dalka music taas oo ah xarunta dalka music iyo radio internet aan ganacsiga ahayn .Various classic ku salaysan ee Grand Rapids in qayb ka mid ah Michigan. Maanta Hot Country bilaabay baahinta ee June 2010 ka yar waa qaab hore oo ay bixiyaan waxyaabaha cusub in dhagaystayaasha ay maalin kasta.
31. baaxadda (radio)
Ryerson University ee campus cusub iyo bulshada ayaa ka kooban yihiin a radio online weyn, waana magaca waa Scope.This waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo barnaamij ka jaamacadeed iyo bulshada ee barnaamijyada fudud oo waaweyn xirmo barnaamijka NCRA siiyaan interchange.They 6 saacadood content asalka maalin walba.
32. løvetann Radio
Goobta radio Tani, ka dib markii løvetann Records magacaabay, waa calaamadda ee Peel orday ka 1969-1973.We doonayo haddii Waxaan kuu sheegi karaa in aan caajisaan Idaacada toos ah iyo formatted, oo u ooman yihiin maalmood markii DJ waxay ka kooban intay sii socdeen oo ay la socdaan, sida aanu samayno. Hopely aan ka soo kaban doono dhibaato oo dhan.
Radio Hitz waa magac ka mid ah radio internet baaba'ay station.It waxaa aasaasey Ryan Dunlop 2006 at Ayrshire, Scotland.This idaacada haatan waa qayb ka mid ah Hitz Media Group Ltd. Dunlop sida uu haystay in ka badan 80000 ahaa mid aad u guulaystay in idaacada this dhagaystayaasha 2003. heerarka Tranding ayaa baaraya sheegasho iyo questions.And ay qabsadaan saldhigga tan caanka ah.
Bulshada radio Internet ee University of Glasgow leedahay ay ka madax banaan oo aan macaash doon ahayn Radio station.It weeraryahanka tallaabooyinka in la abuuro content gaar ah radio.Their waxaa soo saaray 200 artist.They madax banaan uusan raacin playlists iyo ugu dambeyntii mas'uul ka ah waxaa soo saarka gaar ah .Taasina waxay diirada saldhigga content iyo in gaar xor u yahay in dadka isticmaala.
35. New Music Normal
Music New caadiga ah waa radio music internetka ah kuwaas oo la eryay by dhagaystayaasha 24/7. A idaacada aadka is-dhexgal programms music ugu fiican cusub indie ku salaysan ee luuq macaan iyo farsamada song. Qaybta laga bilaabo of New Normal Network Tom Leykis ayaa waxaa la abuuray by Tom weheliyaan iyo qof kale ee la magacaabey Art Webb oo ay bilaabay xarun raadiye oo ku saabsan 2010, 1-dii July.
Boggan waxa uu bixiyaa fududaato in la isticmaalo iyo nidaamka music lagu kalsoonaan karo bixinta. WXB The Internet-ka ay hawlgalkeeda webcast nool oo gaar ah ee Live365 la haystaa sacab muggiis oo dhagaystayaasha. Sida caadiga ah waxaannu doonaynaa inaannu furo la kaliya 3 dhagaystayaasha iyo celcelis ahaan ku saabsan dersin dhagaystayaasha.
Penwith Radio bilaabmaa safar gaari ah. Chris Goninan iyo kuwa maxalliga ah xildhibaanka iyo shaqaalaha adagtahay bulshada, ay ahayd gaari agagaarka Penwith la Nick iyo Daryeelka dadka waaweyn la Support officer.Nick ku sheegay in Chris oo ku saabsan inuu u maleeyo oo ah sida ay go'doon iyo kalinimo badan oo ka mid ah dadka degaanka sida ay dareemayaan. Taasi waa sida ay Radio Penwith ku dhashay 2005
Radio Regent waa saldhigga ah broadband caanka radio taas oo si cad u heli karaan qoysaska Regent Park ee sida durdur cod ku xidhan circuit TV-ga caanka ah ka go'an (macaamiisha shirkadaha cable Rogers oo keliya). Idaacadda broadband radio ayaa bilaabay baahinta on January 1, 2012, waxaana la aasaasay ee Park ee Regent
Station Tani waxaa la aasaasay sanadkii 1993, KUBE Radio ama magaceeda waa ballaadhan yahay Keele University Broadcasting Enterprise, si uu u siiyo horyaalka buuxa) ayaa koray kooxda armaajada ku salaysan gudbinta ah in caalamku aqoonsan yahay iyo Dhagaysteen ka idaacada Internet. The studio asalka KUBE ahaa arday X guri, iyo warbaahinta saldhigga on 107.9FM oo ku eg tahay meel gaar ah oo ku saabsan 10 ruqsadaha adeegga xadiday inta u dhaxaysa 1998 iyo 2004. In kasta oo Laga bilaabo dhammaan ardayda campus adeeg aabooyinka ah ayaa lagu bilaabo March 2003 , iyo September 2004 KUBE guurtay baahinta Internet buuxa.
LifeJive Radio waa raadiye bulshada online ah idaacadaha kala duwan ee warbaahinta inkasta oo adduunka ballaaran 365 maalmood oo Stations Kuwani waxay u dhaxaysaa dhagaxii weynaa ka soo classical in qaboowga Yurub iyo music jilicsan. Hadda waxay leeyihiin 7 xarumaha idaacadaha, hubi website si habayn ku.
41. Kacdoonka Radio
Kacdoonka Radio waa aan faa'iido doon ahayn, xarun raadiye oo wadajir ah ay leeyihiin bulshada oo ku yaal ka soo horjeedka dukaamanka ee degmada Mission ee San Francisco. Waxa ay martigelinayaan iyo baahin live muusikada qaab, majaajilo, gabayo, masrax iyo wareysiyo la fannaaniinta, iyo mufakiriinta u dhaqdhaqaaqa ku nool, ka shaqeeyo isku mar ama soo dhex Area Bay oo ay mudan yihiin in la maqlo.
Radio23.org waa ah idaacad lacag la'aan ah, oo bixiya fursado ah ee warbaahineed. Radio uu baadhayaa oo dhan music iyo dhaqanka.
43. Retro dib u socon
Tani waa saldhigga aad u guulaystay radio bixiya dhammaan noocyada kala duwan ee macluumaadka in aad jeclaan doonaa.
WLIR waa ah idaacad internet caan ah oo u ciyaara music cusub, Oo dhagax weyn oo casri ah, taas oo markii hore loo maqlay on ruux WLIR.The asalka ah ee WLIR waxaa badbaadiyey darsameen music iyo shakhsiyeeyo tusaale ahaan .Dhowaantii waxaan dhihi karaa Larry Gabbo ah, ku taalla gobolka Sue, iyo Denis McNamara .Waxa ay qabtaan waxaa radio sanado badan.
GridStream Productions waxaa la aasaasay bishii May ee sanadkii 2002 by Lan Tarryk Kozar iyo saaxiibo kooban gudahood adduunka dalwaddii ee Anarchy Online (ao), MMORPG ah uu Funcom. Iyadoo mar ay ahaayeen mid ka mid ah idaacadaha ugu horeysay MMORPG dunida internet-ka oo ka caawiyey in ay horyaal fikradda guud ee radio warbaahinta gudaha ka dalwaddii world.This GridStream Productions (GSP) la rumeysan yahay inuu ugu da'da weyn saldhigga Idaacadda Radio MMORPG weli baahinta .
A online Radio magacaabay Nigeria Webradio markii ugu horaysay la aasaasay sanadkii 2006 iyada oo ujeedadu tahay baahinta Nigeria music, wararka iyo madadaalada guriga-dhigay in ay malaayiin Nigeria oo ku nool meel ka baxsan dalka Nigeria. Dhammaan Nigeria oo adduunka oo dhan waxay leeyihiin dareen ku faani guriga meel ka baxsan gurigooda, halkaas oo maalin walba waxa laga yaabaa inay ku yaal dhulka dushiisa oo dhan.
47. buuna Radio
Yaa ma jecla Radio oo Waxaan jeclahay style burcad Radio codka jir ah oo 60meeyadii, 70meeyadii iyo 80s. Buuna Radio gaari this. War akhriyeyaal jecel muusiga oo ay gacanta la jecel yahay marka aad dooranayso lists.We ay ciyaarta ku siin kara kala duwanaanshaha in saldhigyada "tan kuwa dhulkuna" marnaba gaari karin!
Meesha kaliya ee internetka ee ugu fiican ee music Independent ee Hindiya saacad wareega dunida oo dhan. Waxaad ka qaadan kartaa nooc kasta oo muusiko ah oo aad jeclaan lahayd in ay dhegeystaan ​​si fadlan dib u fadhiisan oo wuxuu ku raaxaysan. Waxaad naga tagi karaan line a at music ee radioverve dhibic com ama Leave a comment sanduuqa oo ugu dhaqso badan waxaan kugu xiri doona.
Radioseven ku salaysan yahay urur oo ay tahay aan faa'iido doon ahayn. Waxaa horumariyo waa adeeg muddo sanado ah sidii ay u bilaabmaan saldhigga yar internetka ku salaysan hiwaayad iyo hadda waa mid ka mid ah mid ugu weyn ee Sweden. Dadka halkaas wakhti maray farxad users .Maximum yihiin kala duwan ee 15 ilaa 35 sano.
50. The guuxi
Cameron Avery waxaa la aasaasay Koox iyo ka dib somedays ay band burburiyeen. Waxa uu leeyahay laba drummers magacaabo Brian Lucey .Waxa uu yahay aasaasihii this Radio Station.They kulmi agatin raadiyaha iyo ka dhigi safar caalamiga ah ee 2012 iyo dhegeyste 2013.The waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu dhagaysan kaliya gabay.
> Resource > Download > Top 50 Online Radio Stations talinayo